China ZR-2021 Nnukwu usoro ihe eji emepụta ikuku nke ikuku microbe na ndị nrụpụta | Junray
Qingdao Junray Intelligent Instrument Co., Ltd. Njikọ
Biosafety kabinet & ọcha ụlọ
Bioaerosol metụtara equipments
ZR-1211 Mask iku ume na-anwale
ZR-1006 Ihe nkpuchi ihe nhicha nke oma na nyocha nke ikuku
Nkpuchi Bacterial Filtration arụmọrụ (BFE) Nyocha
ZR-2021 Nnukwu mmiri na-efe efe ikuku
ZR-2021 Nnukwu ihe na-eme ka ihe na-eme ka ikuku na-arụ ọrụ na-etinye aka na nchịkọta microbe. Ngwaahịa nwere ọtụtụ nkebi nke isi nlele, nwere ike ịnakọta aerosol wee wepu ihe karịrị 12 μm na obere karịa 2 μm dị ka ájá, pollens na ihe ndị ọzọ. Anakọta inhalable ahụ n'etiti 2μm ka 12 μm na uche ka obere airflow, mgbe ahụ na-anakọta site porton sampler.
US $ 15,000-30,000 / Ibe
ZR-2021 Enwere ike iji nnukwu ihe mmetụ ikuku microbor dị ka akụrụngwa pụrụ iche maka nlekota gburugburu ebe obibi site na ụlọ ọrụ nyocha ndị ọkachamara, ebe a na-ahụ maka ọrịa, ụlọ ọgwụ, na ngalaba nchekwa gburugburu ebe obibi, ọ dịkwa mma maka nleba anya nchekwa nchekwa ndụ na ebe dị mkpa dị ka nyocha nyocha ọdụ ụgbọ elu na nnukwu ogbako.
Ultra na-etinye uche ma na-ekewapụta teknụzụ, na-amata nnukwu ikuku inhalation na obere impinge.
High nkenke electronic eruba akara, na-aghọta 3 ụzọ ezi eruba akara.
Oge nlele dị mkpirikpi, arụmọrụ dị elu.
Nnukwu nsogbu na-adịghị mma, nnukwu mgbanwe ofufe, mkpali siri ike, obere mkpọtụ.
5-anụ ọhịa ihuenyo mmetụ, ọdịnaya bụ kensinammuo na ọrụ dị mfe.
Portable imewe ， usu na-etinye uche Sampler nwere ike iche na-ezukọ.
Nkwado mpụga Bluetooth na-agba ọsọ ọsọ.
Nkwado mbupụ data USB, wuo nnukwu nchekwa data.
Akpaka nchedo n'oge nlele, gaa n'ihu nlele mgbe ejikọtaghachiri ya na ike.
Mperi Ikike Kachasị Anya (MPE)
Ihe nlele nke A 924L / nkeji 1 L / nkeji 2.5%
Ihe nlele nke B 77L / nkeji 1 L / nkeji 2.5%
Ihe nlele nke C 7L / nkeji 0.1 L / nkeji 2.5%
Nrụgide tupu flowmeter (-30 ~ 0) kPa 0,01 kPa 2.5%
Okpomọkụ tupu flowmeter (.20 ~ 150)℃ 0.1℃ 0,5 ℃
Ike ọrụ AC220V ± 10% 50Hz
Na-arụ ọrụ okpomọkụ -20 ~ 45 ℃
Nsogbu gburugburu ebe obibi （60 ~ 130） kPa
Ike oriri nke onye nnabata
Nha ọbịa （Ogologo 380 × obosara 240 × elu 285） mm
Ibu ibu nke nnabata Ihe dị ka 9㎏
Nke gara aga: ZR-2050A Airborne microbe sampler
Osote: Nkpuchi Bacterial Filtration arụmọrụ (BFE) Nyocha
Na-ese n'elu Microbe Sampler
Nnukwu Flowgba Ọdụ ụgbọelu Microbe Sampler
ZR-1013 Biosafety kabinet quality ule
address (Adreesị):No.1 XueYue Road, Chengyang District, Qingdao, Shandong Province, China